Chelsea oo qalbi jab kala kulantay saxiixa xiddig ay ka doonayeen Barcelona – Gool FM
Chelsea oo qalbi jab kala kulantay saxiixa xiddig ay ka doonayeen Barcelona
Haaruun May 3, 2020
(Barcelona) 03 Maaajo 2020. Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa doonaya inuu xilli ciyaareedkan dib u qaabeyn xooggan ku sameeyo safkiisa, waxaana qorshayaasha uu ku dhisayo ka mid ah goolhayaha kooxda Barcelona ee Marc-Andre Ter Stegen.
Balse xiddiga Jarmalka u dhashay ayaa si cad u qiray inuusan xilligan ka dhaqaaqi doonin kooxda Barca, isagoo xaqiijiyay inuu kooxda kula jiro wada hadallo heshiis kordhin ah.
Mustaqbalka Ter Stegen ee kooxda Barcelona ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku hoos jiray mugdi, taasoo soo jeedisay dareenka kooxo ay ka mid yihiin Chelsea iyo Paris Saint-Germain, iyagoo qiimeynaya suuro galnimada lagu heli karo saxiixiisa.
Si kastaba ha ahaatee, inkastoo shaki badan la galinayay sii joogistiisa kooxda La Liga difaacaneysa, misena waxa uu goolhayahan sheegay inaysan jirin sabab uu kaga tagi karo garoonka Camp Nou.
28-jirkan ayaa sidoo kale sheegay inay horraan qabsoomeen wada hadallo heshiiskiisa loogu kordhinayo kaasoo ku kacay saddex sano oo hor leh, balse soo shaac bixitaanka qandaraaskaas uu hakad u galay xanuunka dunida ku faafay ee coronavirus awgiis.
“Waxaan qaadannay wada hadallo, balse hakad ayay galeen xaaladda darteed. Waxaa jiro arrimo badan oo muhiim ah,” ayuu Ter Stegen ku sheegay muuqaal toos ah oo uu kaga jiray bartiisa Instagram.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay Barcelona, xaaladdeyda way wanaagsan tahay, maxaa kale oo aad i weydiineysaan? Waan ka nastay heshiis kordhinta, durbana waan u billaabi doonaa”.
Ter Stegen ayaa ku sugnaa Barca tan iyo 2014 kaddib markii ay 10 milyan oo gini kaga soo qaadatay Borussia Monchengladbach, inkastoo labadii xilli ciyaareed ee ugu horreysay uu ku hoos jiray hooska Claudio Bravo, kaasoo 2016 ku biiray kooxda Manchester City.
Inkastoo wada hadalladii laacibkan iyo Barca ay joogsadeen, haddana kooxda reer Spain ayaa dareemeysa inuusan cadaadis saarneyn kaasoo la xiriiri iibinta Ter Stegen maadaama qandaraaskiisa uu dhacayo 2022.
Dowladda Talyaaniga oo go’aan ka soo saaraty xilliga ay kooxaha Serie A billaabayaan tababarka
Man United oo mid ka mid ah xiddigaha PSG u sameysay ballan qaad weyn si uu ugu soo biiro